Iingcebiso malunga nendlela yokuBhala izihloko zePosi eziMangalisayo kunye nezihloko
Izihloko, izihloko zeposi, izihloko, izihloko… nantoni na ofuna ukuyibiza, zezona zinto zibaluleke kakhulu kuwo onke amaqhekeza omxholo owuhambisayo. Kubaluleke kangakanani? Ngokwangoku Quicksprout infographic, ngelixa Ngama-80% abantu abafundileyo isihloko, kuphela I-20% yabaphulaphuli bayacofa. Iimpawu zetayitile zibalulekile enjini yokukhangela noun kwaye iintloko zibalulekile ekufumaneni umxholo wakho ekwabelwana ngayo kwimidiya yoluntu.
Ngoku ukuba uyazi ukuba iintloko zibalulekile, usenokuba uyazibuza ukuba yintoni elungileyo kwaye ibhalwa njani, akunjalo? Ewe, namhlanje lusuku lwakho lwethamsanqa kuba uQuicksprout udale ifayile ye- infographic eya kukufundisa kanye.
Ukusetyenziswa kwezichazi, ukungakhathali, amanani kunye nefomula iyonke Inani okanye iTrigger yeLizwi + Isichazi + Igama eliphambili + Isithembiso ilingana nesihloko esifanelekileyo. UNeil ukhankanya izihloko ezimfutshane kwaye zimnandi kuba abantu bathanda ukuskena kule mihla.
Ngelixa ndihlala ndisixabisa isihloko esifutshane, sibonile iisayithi ezininzi ezifumene amaxabiso okuphendula amangalisayo kunye nezihloko ezide, ezinesenzi esidibana nomfundi. Andiyi koyika ukuvavanya zombini kunye nexesha elide. Unokufuna uhlengahlengise nje itayitile yesihloko kwezi zihloko ukuze iinjini zokukhangela zinganqumli umxholo owawusebenza nzima ukuphuhlisa.
Nika ingqalelo ingcebiso yokugqibela… izihloko zihlala zisilela kuba azingqinelani nenqaku elibhaliweyo, azichazwanga ngokwaneleyo, kwaye izihloko ziyadida. Ngaba ufuna uncedo olongezelelekileyo kwaye ufuna ukonwaba? Ungalibali ifayile ye- Umxholo we-Idea Generator ovela ePortent ecebisa ezinye izikhonkwane zezihloko zakho, kubandakanya iintloko ezifumana ingqwalaselo ngeendlela ezinje nge-ego, uhlaselo, izixhobo, iindaba, ngokuchaseneyo, kunye noburharha.
tags: ukuhlaselaIntengiso yeBakerumxholo wenqaku lomenziNgomondengokuchaseneyoikopi yeebloggerEchoOosomashishini-uhambokhamphanizihlokoindlela yokubhala iintlokoindlela yokubhala izihlokoezihlekisayonyusa izinga lokucofaYongeza i-SERP CTRizambathoU kuThengiswainkwenkweNeil pateliindabaiintloko ezigqibeleleyoumangalisoNgokufanelekileyoquicksproutUvimbaIsiqalo senyangaiingcebiso ngezihlokoiingcebiso zezihlokoizihloko
I-Kroger Chefbot: Ityala eliSebenzisiweyo lokubonelela ngeXabiso kwiMithombo yeendaba yoLuntu ngeTekhnoloji yeBhot
Agasti 25, 2014 kwi-10: 07 AM
Uqaqambileyo! Sifuna ii-listicles ezinesihloko esinomtsalane ngakumbi kwiwebhu.